China Ikuku na-ekuku ume ụgbọ ala n'olu ohiri isi inflatable factory na suppliers | AoFeiTe
Ọrụ:Iwepụ Ike ọgwụgwụ
Agezọ ịhịa aka:Kwardhịa aka azụ
Adabara:Olu akwa ọcha
Afọ Otu:Afọ niile
Ọrụ:OEM / ODM
Mbipụta:Hazie Logo bụ Welcom
Product aha:Ikuku ikuku iku ume iku ume ezumike
Nkwakọ ngwaahịa:1 ibe / pp akpa
Arụpụta:100000 Ibe / iberibe kwa ọnwa
Tụkwasịnụ Ikike:100000 Ibe / iberibe kwa ọnwa
Ikuku ikuku iku ume iku ume ezumike
1. Naanị njem njem inflatable olu nke na-enye nkwado zuru oke maka ahụ dị elu na-eme ka ọ dịkwuo mfe izu ike, hie ụra, ma hie ụra ogologo oge.
2. Na-akwalite nhazi isi na olu kwesịrị ekwesị - NA-EBU ISU N'AL F N'IHU. Ezigbo maka ndị na-arịa ọrịa mgbu na-adịghị ala ala. 3. INFLATES EASILY with just a few ume na-akọwa ozugbo. Na-echekwa nke ọma mgbe akpọre ya iji belata oghere akpa. 4. Patented ERGONOMIC design na-enye nkwado kwesịrị ekwesị iji gbochie esemokwu na olu olu.
5. VERSATILE: Okenye & Childrenmụaka. Ọ dị mma maka ụgbọ elu, bọs, ụgbọ oloko, ụgbọ ala, ịma ụlọikwuu, azu paaki, oche nkwagharị, ọdụ ọdụ ụgbọ elu.
Anyị bụ ndị ọkachamara na nlekọta ahụike na orthopedic ngwaahịa dị ka Ikpere emem nkwado Nkwado, Akwa azụ emem nkwado Nkwado, Ngosi Corrector, Nkwonkwo aka Nkwado, Ikiaka nkwado Nkwado, Mgbehu emem nkwado Nkwado, Jirinụ Aka Nkwado, Olu Nkwado Nkwadowere gabazie. Ọzọkwa otu ọrụ ọrụ anyị bụ Nhazi CUSTOMIZE. Anyị nwere ike ịmepụta ngwaahịa na njirimara imewe gị na igbe agba. Anyị na-atụ anya iso gị rụọ ọrụ ogologo oge!
Ikuku na-eku ume ụgbọ ala na-ezu ike ohiri isi inflatable: (1) Materials: ajị anụ na adụ felted flocking ịkwanyere. (3) N’agbanyeghi njem ma ọ bụ naanị inwe ezumike n’ụlọ, ohiri isi nwere ike ichebe olu gị ma mee ka ahụ dị gị mma. (4) Ihe nkpuchi a nwere ike iwepụ ma sachaa. (5) Nnọọ obere na mfe mbukota. I nwedịrị ike itinye ya n’akpa n’akpa akpa ahụ. (6) Mezuo usoro pro65.
Ntak emi Họrọ Anyị Aofeite: 1. Ezigbo ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na igwe na ọrụ aka ọrụ. 2. Ndị ọrụ nwere ahụmịhe na azụmaahịa mba ọzọ. 3. Alibaba ọla edo soplaya. 4. Anyị nwere ike ịnabata obere iwu na OEM iji. 5. Ọkwa dị elu, yana asambodo CE / FDA na asambodo ISO. 6. A na-anabata usoro asọmpi na nnyefe ọsọ ọsọ, a na-anabata usoro mbupu niile. 7. paymentzọ ịkwụ ụgwọ dịgasị iche, LC, TT, Western Union, Grame Money na Paypal. 8. Otu afọ akwụkwọ ikike na mgbe-ire ọrụ. 9. Ọ bụ uche anyị ka anyị too na ndị ahịa anyị ọnụ.
Na-achọ ezigbo Negbọ ala Ezumike Ezumike Ohiri & Emeputa? Anyị nwere nhọrọ dịgasị iche iche na nnukwu ọnụ ahịa iji nyere gị aka ịmepụta ihe. All Olu Izu Ike Ohiri Isi na-àgwà na-ekwe nkwa. Anyị bụ ndị China Mmalite Factory nke Olu Ohiri Isi inflatable. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Nke gara aga: Colombia na-azụ seragem n'úkwù akwa waders ọzụzụ
Osote: Super adụ olu mpịakọta na-akwado njem ohiri isi
N'olu Relaxing Olu Massager Pain Relief Head Ha ...
Soft Air inflatable Olu Cervical Traction Ngwaọrụ
Medical ikuku cervical inflatable n'olu traction d ...
Hot Kemeghi inflatable Cervical Olu Tractio ...
U udi inflatable njem olu support ohiri isi